फेरी ९ अर्ब आईपीओ आउँदै,हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार फेरी ९ अर्ब आईपीओ आउँदै,हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी
फेरी ९ अर्ब आईपीओ आउँदै,हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसायमा विदेशिएका नेपालीले विदेशबाट नै नेपालमा प्राथमिक शेयर भर्दै आएका छन् । विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर गैर आवासीय संघ(एनआरएनए)ले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई डलरमा भर्न पाउने गरी आईपीओ निष्कासन गर्ने जनाएको छ । एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट फण्डको कम्पनीकालागि प्रति कित्ता १० डलरका दरले शेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ ।
संघले निष्कासन गर्ने प्राथमिक शेयरमा गैर आवासीय नेपालीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेगैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । मुलुक भित्र रहेका नेपालीले भने त्यस किसिमको प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिन पाउने छैनन् ।
संघले दुई वर्ष अघि लगानी सम्मेलन मार्फत १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुरूप लगानी भित्र्याउन भन्दै प्राथमिक शेयर निष्कासनको तयारी गरेको हो । यसमा आफ्नो १० प्रतिशत र नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी रहने गरी एनआरएनले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच कम्पनी खोल्ने विषयको टुङ्गो लागि सकेको छ । यसका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको संस्थापक लगानीको लागि प्रतिबद्धता आइसकेको संघले जनाएको छ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत लगानी (पब्लिक) गैर आवासीय नेपालीको हुने छ ।
संघले विदेशमा रहेका १० लाख लगानीकर्ताको डिम्याट खाता खोल्ने अभियान चलाउँदै छ । लगानी गर्नका लागि ७० भन्दा बढी प्रोजेक्टको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
Previous articleफ्रीजमा नराख्नुस् यी ८ खानेकुरा
Next articleकारोबार सुरु भएको ५ मिनेटमै चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट, हेर्नुहोस कति पुग्यो शेयर मुल्य
२ बर्ष भित्र बिहे गर्ने साेचमा सिवाकोटी
नेपालमा मौसम बदली, यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
आज करिब ५ घण्टा सूर्यग्रहण लाग्दै